भगवान एक बक्स मा, विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
कतिजना मानिसहरू - इसाई र गैर-इसाईहरू - के परमेश्वर एक बाकसमा हुनुहुन्छ? भगवान्लाई बक्समा राख्नुको अर्थ हामीलाई लाग्छ कि हामी उहाँको इच्छा, प्रकृति र चरित्र जान्दछौं। हामीले बाकसको टुप्पोमा धनु राख्छौं जब हामीलाई लाग्छ हामी यो बुझ्दछौं कि यसले हाम्रो जीवन र सम्पूर्ण मानवजातिका लागि कसरी काम गर्दछ।
लेखक एलिस फिट्जपाट्रिकले आफ्नो पुस्तक Gods of the Heart मा लेख्छिन्: भगवानको इच्छालाई वास्ता नगरेको र भगवानको स्वरूपको बारेमा त्रुटि मूर्तिपूजाको दुई गम्भीर कारणहरू हुन्। र म थप्छु: यी धर्म र जीवनको बारेमा व्यक्तिहरूको धेरै समस्याहरूको कारणहरू हुन्। अज्ञानता र त्रुटिले हामीलाई भगवान्लाई एउटा बक्समा राख्छ।
म उदाहरण दिन चाहन्न किनकि परमेश्वर र म दुबैले जान्दछौं कि म र मेरो चर्च त्यहाँ छु र गरेको छु। र म निश्चिन्त छु कि हामीले ईश्वरलाई आमनेसाथ नदेखासम्म हामी कहिल्यै पनि अज्ञानता र त्रुटिलाई हल्लाउन सक्षम हुनेछैनौं जुन मानव अवस्थाको अंश जस्तो देखिन्छ।
बरु म धनुलाई फुकाल्ने, टेप हटाउने, र्यापि paper पेपर हटाउने र बाकस खोल्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछु। धनुलाई हटाउनुहोस् - परमेश्वरको स्वभावको बारेमा सिक्नुहोस्। उ को हो? यसको विशेषता र चरित्र के हो? धर्मशास्त्रको माध्यमबाट उसले आफूलाई प्रकट गर्न अनुमति दिनुहोस्। टेप हटाउनुहोस् - बाइबल पुरुष र महिलाको बारेमा अध्ययन। उहाँले तिनीहरूका लागि कुन प्रार्थनाहरूको जवाफ दिनुभयो र कसरी? र्यापि paper पेपर खोल्नुहोस् - तपाईंको जीवनलाई खोज्नुहोस् कि उसको इच्छा के हो र उसले तपाईंको जीवन कसरी आकार दियो। कुनै श .्का बिना, उहाँको योजना तपाइँको भन्दा फरक थियो।
बक्स खोल्नुहोस् - पहिचान गर्नुहोस् र खुल्लासाथ स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईंलाई सबै कुरा थाहा छैन र तपाईंको चर्चले सबै कुरा जान्दैन। मेरो पछाडि दोहोर्याउनुहोस्: भगवान परमेश्वर हुनुहुन्छ र म हुनुहुन्न। हाम्रा आवश्यकताहरू, चाहनाहरू र पतित प्रकृतिका कारण हामीहरूसँग परमेश्वर आफ्नै स्वरूपमा सृजना गर्ने प्रवृत्ति छ। हाम्रो विचार र विचारहरूको माध्यमबाट हामी यसलाई हाम्रो इच्छा वा आवश्यकता अनुसार आकार दिन्छौं जुन यो हाम्रो विशेष परिस्थितिहरूमा फिट हुन्छ।
तर हामी पवित्र आत्माको डो and्याइ र शिक्षाको लागि खुला छौं। उसको मद्दतले हामी बाकस खोल्न सक्दछौं र परमेश्वर ईश्वर हुन दिन्छौं।